एस्ट्रेस बनाम प्रेमारिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एस्ट्रेस बनाम प्रेमारिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यदि तपाइँ रजोनिवृत्ति लक्षणहरू, जस्तै तातो फ्ल्यासको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, रात्री पसिना , निद्रा समस्याहरू, र योनि सुख्खा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक हार्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी वा एस्ट्रोजेन थेरापी उल्लेख गरेको हुन सक्छ। रजोनिवृत्तिका लक्षणहरू देखा पर्दछ जब शरीरले कम एस्ट्रोजेन बनाउँदछ, त्यसैले एस्ट्रोजेनलाई प्रतिस्थापन गर्ने औषधीहरूले यी लक्षणहरूलाई सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, र ओस्टियोपोरोसिस रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
गर्भाशय भएको महिलाहरूमा, हर्मोन थेरापी दुबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन समावेश गर्दछ। गर्भाशय भएका महिलाहरूमा, एस्ट्रोजेन एक्लोले एंडोमेट्रियल क्यान्सरको जोखिम बढाउँदछ।
गर्भाशयबिना महिलाहरूले (जसलाई हिस्टरेक्टोमी भएको थियो) एस्ट्रोजेनको साथ प्रोजेस्टेरोन लिन आवश्यक पर्दैन। यी महिलाहरूले एस्ट्रोजेन-मात्र उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्छन् जस्तै एस्ट्रास वा प्रिमारिन।
इन्ट्रेस र प्रेमेरिन दुई ब्रान्ड नाम औषधि हो र रजोनिवृत्ति लक्षणहरु को उपचार को लागी संकेत गरीएको छ। दुबै औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। तिनीहरू ईस्ट्रोजेन भनिने औषधीहरूको वर्गमा छन् र हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीको रूपमा पनि चिनिन्छन्। तिनीहरू क्रिम र ट्याब्लेटहरू सहित विभिन्न प्रकारका फर्म्युलेसनमा उपलब्ध छन्। जे होस् दुबै एस्ट्रास र प्रेमेरिनले एस्ट्रोजेन समावेश गर्दछ, तिनीहरू वास्तवमा समान छैनन्। एस्ट्रेस र प्रेमरिनको बारेमा बढि जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
कसरी रक्तचाप छिटो तल ल्याउन
एस्ट्रेस र प्रेमरिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Estrace ब्रान्ड र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छ र घटक समावेश गर्दछ estradiol । एस्ट्रस योनी एस्ट्रोजेन क्रीमको रूपमा, र मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
Premarin एक ब्रान्ड नाम औषधि मात्र उपलब्ध छ। यसमा कन्ज्युगेटेड एस्ट्रोजेनहरू छन्, गर्भवती mares 'पेशाबबाट शुद्ध (त्यसैले नाम प्रेमारिन- PREgnant MARes urINe)। Premarin योनी एस्ट्रोजेन क्रीम, मौखिक ट्याब्लेट, वा इंजेक्शन को रूपमा उपलब्ध छ।
एस्ट्रास र प्रेमरिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एस्ट्रोजेनहरू / हर्मोन प्रतिस्थापन थेरापी एस्ट्रोजेनहरू / हर्मोन प्रतिस्थापन थेरापी
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड र जेनेरिक ब्राण्ड
जेनेरिक नाम के हो? Estradiol कन्जुएटेड एस्ट्रोजेनहरू
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? योनि क्रीम, मौखिक ट्याब्लेट योनि क्रीम, मौखिक ट्याब्लेट, इंजेक्शन
मानक खुराक के हो? क्रीम: २ देखि grams ग्राम योनिमा दैनिक १-२ हप्ता सम्म, त्यसपछि हप्तामा १ ग्राम १-aपटकको मर्मत खुराकमा घटाउनुहोस्
ट्याब्लेटहरू: भिन्न हुन्छन् क्रीम: ०. grams ग्राम योनिमा हप्तामा दुई पटक
ट्याब्लेटहरू: भिन्न हुन्छन्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? Postmenopausal महिलाहरू, कहिलेकाँही पुरुषहरूमा निश्चित संकेतहरूको लागि (तल हेर्नुहोस्) Postmenopausal महिलाहरू, कहिलेकाँही पुरुषहरूमा निश्चित संकेतहरूको लागि (तल हेर्नुहोस्)
अवस्था एस्टेरेस र प्रेमरिन द्वारा उपचार गरिएको
एन्ट्रेस क्रीम र प्रेमरिन क्रीमले रजोनिवृत्तिको कारणले योनि र भल्वार एट्रोफी (पातलो, सुख्खा, र सूजन) को मध्यम देखि गम्भीर लक्षणहरूको उपचार गर्दछ।
ट्याब्लेट फारममा, एस्ट्रेस र प्रेमेरिनले तलका चार्टमा सूचीबद्ध बिभिन्न अन्य सर्तहरूको उपचार गर्दछ।
सर्त एस्ट्रेस Premarin
रजोनिवृत्तिका कारण भल्भार / योनि शोषको गम्भीर लक्षणहरूलाई मध्यम हो (क्रीम) हो (क्रीम)
हाइपोगोनैडिजम, क्यास्ट्रेसन, वा प्राथमिक डिम्बग्रंथि विफलताका कारण हाइपोस्ट्रोजेनिज्मको उपचार हो (ट्याब्लेट) हो (ट्याब्लेट)
स्तन क्यान्सरको उपचार (केवल महामारीको लागि) केटीहरू र मेटास्टेटिक रोगका साथ पुरुषहरूमा हो (ट्याब्लेट) हो (ट्याब्लेट)
प्रोस्टेटको उन्नत एन्ड्रोजन-आश्रित कार्सिनोमाको उपचार (व्याकुलको लागि मात्र) हो (ट्याब्लेट) हो (ट्याब्लेट)
उच्च जोखिममा रहेका महिलाहरूको लागि पोस्टमेनोपौसल अस्थिसुसार रोकथाम, जब गैर-एस्ट्रोजेन औषधीहरू उपयुक्त हुँदैनन्। हो (ट्याब्लेट) हो (ट्याब्लेट)
एट्रोफिक वेजिनिटिस र क्राउरोसिस भल्भाको उपचार अफ-लेबल हो (क्रीम)
मध्यम देखि गम्भिर dyspareunia को उपचार (दर्दनाक संभोग) रजोनिवृत्ति को कारण अफ-लेबल हो (क्रीम)
रजोनिवृत्तिका कारण मध्यम देखि गम्भीर vasomotor लक्षणहरूको उपचार हो (ट्याब्लेट) हो (ट्याब्लेट)
के एस्ट्रेस वा प्रेमेरिन बढी प्रभावकारी छ?
अध्ययन कार्यक्रम जब एस्ट्रोजेन उत्पादनहरू तुलना गर्ने क्रममा, एस्ट्राडियोल (एस्ट्रासमा रहेको घटक) र कन्ज्युगेटेड इस्ट्रोजेनहरू (प्रेमरिनमा अवयव) समान रूपमा रजोनिवृत्ति लक्षणहरूको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छन्। योनि क्रीम प्रभावकारी छन् र राम्रोसँग सहन गरिएको।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्छन् कुन औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त छ, तपाईंको लक्षणहरू, चिकित्सा सर्तहरू, र चिकित्सा ईतिहासलाई विचार गर्दै।
कभरेज र लागत तुलना तुलना एस्ट्रेस बनाम Premarin
बीमा र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाले सामान्यतया एन्ट्रेस र प्रेमरिनलाई समाहित गर्दछ।
एक सामान्य जेनेरिक एस्ट्रस प्रिस्क्रिप्शन क्रीमको ट्यूबको लागि हो र pocket costs costs लागत यदि तपाइँ खल्तीबाट भुक्तान गर्नुहुन्छ, तर नि: शुल्क सिंगलकेयर कूपनको प्रयोगले मूल्यलाई $ as मा कम ल्याउन सक्छ।
एक ट्यूब Premarin को लागी एक विशिष्ट नुस्खे को लगभग $ 250 को जेब को लागत। एक सिंगलकेयर कार्डले मूल्यलाई १ $ as low सम्ममा कममा ल्याउन सक्छ।
योजनाहरू फरक भएपछि, कभरेज विवरणहरूको लागि तपाईंको बीमा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मात्रा १ ट्यूब १ ट्यूब
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ १- $।। । २- $ 1$१
एकलकेयर लागत + + + $ 198 +
एस्ट्रेस बनाम प्रेमारिनका सामान्य साइड इफेक्टहरू
एस्ट्रस र प्रेमेरिन क्रीमको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा एप्लिकेसन साइट प्रतिक्रियाहरू जस्तै खुजली, डिस्चार्ज, गर्भाशय रक्तस्राव, र सूजन समावेश गर्दछ। थप रूपमा, टाउको दुख्ने र श्रोणि दुख्न सक्छ। साइड इफेक्ट को प्रतिशत एस्ट्रेस को लागी निर्धारित जानकारी मा शामिल गरीएको छैन।
ट्याब्लेट फारममा एस्ट्रस र प्रेमरिनको सामान्य साइड इफेक्टहरू अधिक प्रणालिक छन्। यी साइड इफेक्टहरूमा केहि पेट वा कम्मर दुखाइ, कमजोरी, सूजन, टाउको दुख्ने, कब्ज, ग्यास, मतली, वजन, डिप्रेसन, घबराहट, चक्कर, स्तन कोमलता / पीडा / परिवर्तन, र योनि स्राव, रक्तस्राव, वा खमीर संक्रमण समावेश छ।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्। कुन स्वास्थ्य प्रभावहरूको आशा गर्न सकिन्छ, र कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गर्न तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
एस्ट्रस क्रीम Premarin क्रीम
टाउको दुखाई हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो -5-%% *
पेल्विक दर्द हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो %%
खुजली हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो १-२%
योनि स्राव हैन - हो %- 3-4%
योनि रक्तस्राव हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो १-२%
योनि को सूजन हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो १-२%
योनि संक्रमण / खमीर संक्रमण हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो %- 3-4%
* खुराक आवृत्ति मा निर्भर गर्दछ
स्रोत: डेलीमेड ( एस्ट्रस क्रीम ), डेलीमेड ( Premarin क्रीम )
एस्ट्रास बिरूद्ध प्रेमरिनको ड्रग अन्तरक्रिया
एस्ट्रेस वा प्रेमेरिन केहि ड्रग्सबाट प्रभावित हुन सक्छ जुन साइटोक्रोम-पी 5050० A ए called भनिने एन्जाइमले मेटाबोलिज गरिन्छ। एन्जाइमलाई निषेध गर्ने ड्रग्सले एस्टेस वा प्रेमेरिनको शरीरको प्रसंस्करणलाई ढिलो गर्न सक्छ, जसको अर्थ एन्ट्रेस वा प्रेमेरिन शरीरमा लामो समयसम्म रहन सक्छ, यसले थप साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ। साथै, एन्जाइम गराउने ड्रग्सले शरीरलाई एस्टेरेस वा प्रेमरिन द्रुत रूपमा प्रक्रिया गर्न सक्छ, यसलाई कम प्रभावकारी बनाउँदै। सम्भव औषधी अन्तर्क्रियाको बारेमा तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग एस्ट्रेस Premarin
रिटोनाभिर CYP3A4 एंजाइम इनहिबिटरहरू सम्भव छ सम्भव छ
सेन्ट जोन वर्ट CYP3A4 एन्जाइम inducers सम्भव छ सम्भव छ
एस्ट्रेस र प्रेमरिनको चेतावनी
एस्ट्रेस र प्रेमेरिनसँग एक छ बक्से चेतावनी जुन एफडीएलाई आवश्यक पर्ने सबैभन्दा कडा चेतावनी हो। किनभने प्रणालीगत अवशोषण एन्ट्रेस वा प्रिमारिन क्रीमको साथ हुन सक्छ, चेतावनीहरू सबै फर्म्युलेसनहरूमा लागू हुन्छ।
गर्भाशय भएको महिलामा एक्स्ट्रोजन एक्लो (प्रोजेस्टिन बिना) प्रयोग गर्नाले एंडोमेट्रियल क्यान्सरको जोखिम बढ्छ। ईस्ट्रोजेन उपचारमा प्रोजेस्टिन थपेमा एंडोमेट्रियल क्यान्सरको जोखिम कम हुन सक्दछ (तर स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ)। असामान्य रक्तस्रावको साथ पोस्टमेनोपौसल महिलाहरूले कुपोषण हटाउनको लागि जाँच गरिनु पर्छ।
हृदय रोग वा डिमेन्शिया रोक्नको लागि एक्लो ईस्ट्रोजेनको प्रयोग नगर्नुहोस्। महिलाको स्वास्थ्य पहल (WHI) अध्ययन पोस्टमेनोपाउसल महिलाहरूले स्ट्रोक र डीभीटी (डिप वेन थ्रोम्बोसिस, वा खुट्टामा रगत क्लोट) हुने खतरा फेला पारे जसले एक्स्ट्रोजेन एक्लो लिनुभयो (प्रोजेस्टिन बिना)।
उक्त अध्ययनले पोस्टमोनोपौसल महिलाहरूमा डिस्ट्रिया हुने जोखिम पनि देखायो जसले एक्स्ट्राजन पाए।
एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन:
हृदय रोग वा डिमेन्शिया रोक्नको लागि एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन प्रयोग नगर्नुहोस्। डब्ल्यूआईआई अध्ययनले डीएसटी, पीई (फुफ्फुसीय इम्बोलिजम), स्ट्रोक, र एमआई पोस्टमेनोपौसल महिलामा जो एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन लिने जोखिममा बढी जोखिमहरू भेट्टाए। उक्त अध्ययनले पोस्टमेनोपाउसल महिलाहरूमा डिस्ट्रिया विकासको उच्च जोखिम पनि देखायो जसले एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन लिए।
डब्ल्यूआईआई अध्ययनले एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिनको साथ आक्रामक स्तन क्यान्सरको जोखिम बढेको पनि देखायो।
तसर्थ, एस्ट्रोजेनहरू, चाहे तिनीहरू प्रोजेस्टिनहरूसँग वा बिना नै निर्धारित गरिएको छ, न्यूनतम खुराकमा र समयको छोटो अवधिमा तोकिनु पर्छ। हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापीका विभिन्न प्रकारका लाभहरू जोखिमहरूको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई स्क्रीनिंगको लागि चिकित्सा सल्लाह दिनेछ। सबै महिलाहरु एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा एक वार्षिक स्तन परीक्षा र मासिक आत्म-परीक्षा गर्नु पर्छ। सबै महिलाहरूमा उमेर, जोखिम कारक, र ईतिहासको आधारमा म्यामोग्राफी पनि हुनुपर्दछ।
एस्ट्रास र प्रेमरिनका अन्य चेतावनीहरू अनुसरण गर्दछन्।
यदि तपाईंसँग एस्ट्रेस वा प्रिमारिन प्रयोग नगर्नुहोस्:
Undiagnised असामान्य रक्तस्राव
स्तन क्यान्सर (ज्ञात, संदिग्ध, वा इतिहास)
एस्ट्रोजेन-निर्भर नियोप्लासिया (ज्ञात वा शंकास्पद)
डीवीटी वा पल्मोनरी एम्बोलिजम (सक्रिय वा ईतिहास)
सक्रिय वा थ्रोम्बोइम्बोलिक रोगको इतिहास (स्ट्रोक, MI)
एस्ट्रोजेनमा अघिल्लो anaphylactic प्रतिक्रिया
गर्भावस्था (ज्ञात वा शंकास्पद)
संयोजन हार्मोन थेरापी (एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टिन) ले डिम्बग्रन्थि क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ।
पोस्टमोनोपौसल महिला जसले एस्ट्रोजेन लिन्छन् उनीहरूको पित्ताशक्ति रोगको जोखिम बढेको छ जसको शल्य चिकित्सा आवश्यक पर्दछ।
जो मानिस एस्ट्रोजेन लिन्छन्, दृश्य समस्या देखा पर्‍यो। द्रुत चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस् यदि तपाईंसँग दृष्टि गुमाएको छ (आंशिक वा पूर्ण), डबल दृष्टि, आँखा बल्जिंग, वा माइग्रेन।
दुर्लभ मामिलाहरूमा, एलर्जी प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो। यदि तपाईं अंगावर, चिलाउने, सास फेर्न कठिनाई, बान्ता, वा अनुहार, ओठ, जिब्रो, हात, वा खुट्टा मा सूजन छ भने, तुरुन्तै आकस्मिक चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्। एस्ट्रोजेन औषधीले वंशानुगत एंजियोएडेमा भएका महिलाहरूमा एन्जियोएडेमा लक्षणहरू बिगार्न सक्छन्।
तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग यी जोखिमहरूको बारेमा एस्ट्रेस वा प्रिमारिन लिनु अघि कुरा गर्नुहोस्, हेनुहोस् कि औषधि तपाईंको लागि सुरक्षित छ वा छैन।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरू एस्ट्रेस बनाम प्रेमारिनको बारेमा
एस्ट्रेस भनेको के हो?
एस्ट्रास एक हर्मोन प्रतिस्थापन औषधि हो जुन एस्ट्राडियोल हुन्छ। यो धेरै स men्केतको लागि प्रयोग गरिन्छ, प्राय: जसो रजोनिवृत्तिका लक्षणहरूका लागि। एस्ट्रस एक इंट्राभाजिनल क्रीमको साथ साथै मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
Premarin के हो?
Premarin एक हार्मोन प्रतिस्थापन औषधि पनि हो। प्रेमरिनले कन्जुएटेड एस्ट्रोजेनहरू समावेश गर्दछ। यो धेरै संकेतहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, प्रायः मेनोपॉज लक्षणहरूको लागि। Premarin मौखिक ट्याब्लेट, intravaginal क्रीम, र इंजेक्शन को रूपमा उपलब्ध छ।
के एस्ट्रेस र प्रेमेरिन एकै हो?
एन्ट्रेस र प्रेमेरिन समान छन्, तर वास्तवमा उस्तै छैन। माथिको जानकारीमा दुई औषधी बिचको भिन्नतालाई रेखदेख गर्दछ।
के एस्ट्रेस वा प्रेमेरिन राम्रो छ?
दुबै औषधिहरू रजोनिवृत्ति लक्षणहरूको उपचारमा प्रभावकारी छन्, यद्यपि यी औषधीहरू साइड इफेक्ट र जोखिमको साथ आउँदछन्। तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् यदि निर्धारित गर्नुहोस् कि एस्ट्रेस वा प्रिमारिन तपाईको लागि उपयुक्त छ।
के म गर्भवती हुँदा एस्ट्रेस वा प्रिमारिन प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन, न त औषधि गर्भावस्थामा नै प्रयोग गर्नुपर्दछ।
के म रक्सीको साथ एस्ट्रैस वा प्रिमारिन प्रयोग गर्न सक्छु?
Estrace वा Premarin सँगको संयोजनमा मदिरापान गर्न सकिन्छ तपाईको जोखिम बढाउनुहोस् स्तन क्यान्सर को लागी। तपाईसँग भएको कुनै स्वास्थ्य अवस्थाको साथ रक्सीको प्रयोगको मार्गदर्शनको लागि तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरको सल्लाह लिनुहोस्।
Premarin को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प के हो?
एस्ट्रास प्रेमरिनको समान विकल्प हो। एस्ट्रोजेन युक्त अन्य औषधीहरूले भिभेल डट प्याच, क्लाइमारा प्याच, वा योनि इस्ट्रोजेन Vagifem योजाइन ट्याब्लेट (योनी ट्याब्लेटहरू योनी लागूकर्ताको साथ प्रयोग गरिएको) वा एस्ट्रि V योनि रिing्ग समावेश गर्दछ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् कि यी मध्ये कुनै एक औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त छ कि छैन।
के इस्ट्रोजेन र एस्ट्राडियोल एकै समान हो?
Estradiol एस्ट्रोजेनको एक रूप हो, एक महिला हार्मोन। सबै एस्ट्राडियोल उत्पादनहरू ईस्ट्रोजेन हुन्। यद्यपि एस्ट्रोजेनका अन्य प्रकारहरू मात्र छन् मात्र ईस्ट्राडियोल भन्दा। उदाहरण को लागी, कन्जुएटेड एस्ट्रोजेन (Premarin) एस्ट्रोजेन को अर्को रूप हो।
के Premarin डिमेंशिया का कारण छ?
Premarin (र एस्ट्रेस) लाई डिमेन्शियाको बारेमा एक बक्स चेतावनी छ। माथि उल्लिखित डब्ल्यूएचआई मेमोरी स्टडीले पोस्टमेनोपाउसल महिलाहरूमा डिमेन्शिया हुने जोखिम बढेको देखायो जसले प्रोजेस्टिनको साथ एक्स्ट्रोजेन वा एस्ट्रोजेन लिएका थिए। त्यसकारण, निर्धारित जानकारीले सिफारिश गर्दछ कि एस्ट्रोजेन, चाहे एक्लो होस् वा प्रोजेस्टिनको साथ, सबैभन्दा कम खुराकमा र छोटो समयको लागि तोकिनु पर्छ।
के एस्ट्रेसले ईस्ट्रोजेन स्तर बढाउँदछ?
एस्ट्रास (र प्रेमरिन) ले इस्ट्रोजेन स्तर बढाउँदछ। योनि फार्ममा पनि, प्रणालीगत शोषण हुन्छ, र एस्ट्रोजेनको स्तर बढ्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्दछ कि कुन उत्पाद तपाईका लागि सब भन्दा उपयुक्त छ।
अल्बुटेरोल इन्हेलर कति लामो समय को लागी राम्रो छ
5 सर्वश्रेष्ठ सुनवाई एड्स: तपाइँको परम खरीद गाइड
फ्लु संक्रामक कति लामो हुन्छ?
मुँहासे को लागी जन्म नियन्त्रण गोलिहरु को प्रकार
कति छिटो ibuprofen ले तपाइँ tylenol लिन सक्नुहुन्छ
एलर्जी को औषधि म गर्भवती हुन सक्छु
रगतको काममा hct के को लागी खडा छ?